Shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay dalka Tuniisiya – Geelle Mag
VOA Posted On December 2, 2019
26 qof ayaa ku geeriyootay dalka Tuniisiya, kadib markii gaari Bus ah oo ay saaraneyeen uu la rugmaday, gobol ku yaala Waqooyiga dalkaasi Tuniisiya. waxaana sida oo kale ku dhaawacmay dad gaaraya 17 qof oo iyaguna ka mid ahaa rakaabkii gaariga saarnaa, sida laga soo xigtay Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Caafimaaddka ee Dalka Tuniisiya.
Gobalka Shilkani uu ka dhacay ayaa ku caan ah Dalxiiska. inkastoo marar badan gobolkani ay ka dhaceen weeraro ay geysteen kooxaha xagjiriinta ah. waxaa kaloo gobolkaani lagu xusuustaa dhul gariir inta badan ku soo laa laabta.
Shilkan ayaa imaanaya kadib markii gaariga uu ka dhacay buur uu dulmarayey, waxaana saarnaa dad tiradooda lagu sheegay illaa iyo 43 ruux, waxa uuna ka dhacay Magaalo la yiraahdo Ayn Daraaham ee dalkaasi Tuniisiya.
Waxaana goordambe gaaray goobta uu shilkan ka dhacay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha dalkaasi Tuniisiya.
VOA November 15, 2019
VOA November 13, 2019